Amniga Gaalkacyo oo la isku kaashanaya | KEYDMEDIA ONLINE
Amniga Gaalkacyo oo la isku kaashanaya
Kulanka gudiga amniga Mudug ayaa laga soo saarey qodobo ay kamid yihiin in Galmudug iyo Puntland ay iska kaashadaan sugida amaanka magaaladda Gaalkacyo.
GAALKACYO, Soomaaliya - Saraakiisha gudiga isku dhafka ee amniga gobolka Mudug ayaa kulan ay yeesheen ku gaarey go'aanno ku saabsan sidii la isaga kaashan lahaa kahor tagista weerarada argagaxiso ee Al-Shabaab iyo xoojinta nabadda.
Waxay ku heshiiyeen labada Maamulka ee ka dhaxayso Gaalkacyo maamulkeeda ee Puntland iyo Galmudug inay Ciidamadooda ay si wadajir ah uga howlgalaan Koonfurta iyo Waqooyiga Magaaladda.
Arintan ayaa ka dambeysay markii ay soo kordheen qaraxyada Al-Shabaab ee Gaalkacyo, iyadoo midkii ugu dambeeyay ee ka dhacay afaafka Garoonka Kubada Cagta lagu dilay dad badan oo ay ku jireen taliyeyaashiisa taliska 21-aad ee Ciidanka xoogga dalka.
Puntland ayaa walaac ka muujisay weerarada sii kordhaya, iyadoo dhawaan Kooxda Al-Shabaab dil ugu hanjabtay gudoomiyaha Mudug C/ladhiif Sanyare kadib markii uu sheegay inaysan qiimo ugu fadhin masaajida, islamarkaana uu xirayo.
0 Comments Topics: gaalkacyo
Fahfaahin: Qarax ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo
Warar 23 January 2021 8:30
Howlgallo ka socda Gaalkacyo
Warar 23 December 2020 9:57
Warar 21 December 2020 8:21